Mafashama kuGerman: kukuvara, njodzi uye shanduko yemamiriro ekunze | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 19/07/2021 09:38 | Mamiriro ekunze, Mafashama
ari mafashama kuGermany vakafashukira nhau dzese nhasi. Uye haizi yepashoma iyo njodzi inoitika munyika ino. Vanenge vanhu zana nemakumi maviri vakafa uye mazana emazana kuWestern Europe haasisipo mushure memafashama akaipisisa mumakumi emakore. Rekodhi mvura yakaita kuti nzizi dzifashukire, dzichiparadza nharaunda.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese nhau nezve mafashama kuGerman nenjodzi dzatinotarisana nadzo nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze.
1 Mafashama kuGermany
2 Shanduko yemamiriro ekunze nemafashama kuGerman
3 Mvura yakasimba
4 Zvingagona kudziviswa here?
MuGerman, uko huwandu hwevakafa hwadarika zana, Angela Merkel akarayira kurwisa kwakasimba kurwisa shanduko yemamiriro ekunze. Vanhu vanosvika makumi maviri vakafa muBelgium. Netherlands, Luxembourg neSwitzerland zvakakanganiswawo. Zvinhu zvakawanda zvinopa mafashama, asi mweya unodziya unokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze unowedzera mukana wemvura zhinji.
Nyika yatodziya kare kutenderera 1,2 ° C kubvira panguva yeindasitiri yatanga uye tembiricha icharamba ichikwira kunze kwekunge hurumende pasi rese dzicheka zvakanyanya mumhepo.
Mumwe harahwa yakaedza kupinda mudhorobha rakapotsa raparadzwa. Akati vazukuru vake vaivapowo, asi haana kuwana hama dzavo. Kunyangwe zviremera zvakati hazvina chokwadi kuti vangani vanhu vakashaikwa. Iko hakuna chiratidzo chefoni munzvimbo zhinji dzenzvimbo uye kutaurirana kuri kuita zvisingaite. Asi nhasi uno huwandu hwevakafa huri kutarisirwa kuwedzera, uye nekufamba kwenguva, kukura kwenjodzi iyi kwave kujeka.
Pakati peRwizi rweAhr, kune zvisaririra zvakamonyororwa zvedzimba dzakazara nemvura, mabhiriji akaputswa, nzvimbo dzemisasa, uye mapaki etrailer. Kune vanhu vazhinji vanogara imomo uye vakaona kukuvara, zvinenge zvisingaite kufungidzira kuchenesa uye kutanga patsva. Zvinenge 15.000 mapurisa, masoja uye emergency emergency akaendeswa kuGerman kubatsira mukutsvaga uye kununura.
MuBelgium, mafashama anoshamisa anoratidza mota dziri kudhonzwa mumigwagwa yeVerviers. Nekuda kwenjodzi yekuba, nguva yehusiku yekusvika pamba yakagadzwa.
Liege ndiro guta rechitatu pakukura muBelgium mushure meBrussels neAntwerp, avo vakanzi vabude muChina. Vakuru vemunharaunda vanoti avo vasingakwanise kuenda vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzepamusoro-soro dzezvivakwa zvavo. Rwizi Meuse rwunoyerera nemuguta rwakaenzana neChishanu mangwanani, paine huwandu hwakawanda hwekufashukira mune dzimwe nzvimbo.
Shanduko yemamiriro ekunze nemafashama kuGerman
Masayendisiti anoshora vezvematongerwo enyika nekutadza kudzivirira vagari vavo kubva kune zvakanyanya mamiriro ekunze, senge mafashama kuchamhembe kweEurope uye kupisa dome muUnited States. Kwemakore mazhinji, vakafanotaura kuti nekuda kweshanduko yemamiriro ekunze yakaitwa nevanhu, mvura yezhizha nemafungu ekupisa anozowedzera zvakanyanya. Hannah Cloke, Purofesa weHydrology paUniversity of Reading, akati: 'Rufu nekuparadzwa kwakakonzerwa nemafashama muEurope idambudziko raifanira kuve rakadzivirirwa". Vafemberi vakaburitsa yambiro kutanga kwesvondo rino, asi kukwana kwakaringana kwakapihwa yambiro uye gadziriro dzaive dzisina kukwana.
Ichokwadi chekuti iyo yakasara yeNorth Hemisphere iri kusangana nemhepo inopisa isina kumboitika uye moto kunofanira kuyeuchidza vanhu kuti munyika iri kuwedzera kudziya, mamiriro edu ekunze anogona kuve nenjodzi.
Masayendisiti anoti hurumende dzinofanira kudzikisira kabhoni dhayokisaidhi dzinopa zviitiko zvakanyanya uye kugadzirira mamiriro ekunze akaipisisa Zvisinei, kuUK, uko kwakatambura nemafashama akakura neMuvhuro, Hurumende Inopa Zano reKuchinja Kwekuchinja Kwemamiriro ekunze nguva pfupi yadarika yakaudza makurukota kuti gadziriro yenyika yemamiriro ekunze akaipisisa yakaipa kupfuura makore mashanu apfuura. Akadaro hurumende yakangosangana nechikamu chimwe muzvishanu pazvibvumirano zvayo zvekudzikisa kusvuta.
Vhiki rino chete, hurumende yeBritain yakaudza vanhu kuti havafanirwe kucheka ndege nekuti tekinoroji iyi ichagadzirisa dambudziko rekubuda, uye nyanzvi zhinji dzinofunga kuti uku kubheja.
Mvura yakasimba inoramba ichinetsa muEurope yose. Vakuru zvino tarisa kuAustria uye zvikamu zveBavaria kumaodzanyemba kweGerman. Vezvenhau veAustria vakataura kuti zvikwata zvekununura zvechimbi-chimbi munzvimbo yeSalzburg zvaifanira kununura vanhu vakati wandei kubva kudzimba dzavo, uko mugwagwa weguta wakazara nemvura zhinji.
Sekureva kweReuters, vanodzima moto muVienna, guta guru reAustria, vakati huwandu hwemvura inonaya muawa rimwe Mugovera manheru hwakapfuura zvinyorwa zvemavhiki manomwe apfuura. MuBavaria, munhu mumwechete akafa mumafashamo.
Inofanira kutakurwa mupfungwa kuti hazvisi zviitiko zvese zvakanyanyisa zvinogona kukonzereswa nekushanduka kwemamiriro ekunze kuti kuchine humbowo hwakakwana hwazvo. Zvakanyanya mamiriro ekunze zviitiko zvave zviripo kwemamirioni emakore uye hazvina kubatana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nekudaro, pane kuwirirana pakati pe kuwedzera kwekushisa kwepakati nepasi uye kuwedzera kwezvemamiriro ekunze zvakanyanya semafashama eGermany.
Zvingagona kudziviswa here?
Pakave nekuwedzera kwekushoropodza kuti hurumende yeGerman haina kushandisa zviwanikwa zvese zviripo, kusanganisira veruzhinji terevhizheni, kutaura nezviitiko panguva yemafashama. Mazuva mana njodzi huru kuGerman isati yasvika, hurongwa uhu hunonzi hwakatumira yambiro kunyika neBelgium. Zvisinei, hapana rubatsiro kutumira yambiro kana vanhu vasingazive maitiro mune mafashama mamiriro uye havana kugadzirira njodzi yakadaro, havasi kuchengeta chikafu, mvura nezvimwe zvinodiwa. Nyanzvi dzakatsanangura kuti, chero zvodii, zvinonetsa kudzinga mumaawa mashoma kubva panzvimbo iri padyo nebheseni remupata uye mumupata wakafanana neguta reSchulder.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve mafashama eGerman.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Mafashama kuGermany
Chii chinonzi zvakasikwa